Inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka. Izici, izimfihlo nokuthi kungani kwenzeka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka es umcimbi wezinkanyezi okwaziwa ngokuba khona kwezinyanga ezimbili ezigcwele ngenyanga efanayo. Kungani lokhu kwenzeka, nini futhi kaningi kangakanani into efundwa kakhulu kusayensi. Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi iyini inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka nokuthi kungani yenzeka, kanye nezinye izimfihlo.
Ingabe ufisa ukwazi ukuthi inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka iyini? Qhubeka ufunde ngoba sikutshela konke.
1 Yini inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka
2 Izinyanga ngoMashi 2018
3 Ngubani igama layo uma kungenasibhakabhaka
4 Izigaba zenyanga kuma-hemispheres ahlukahlukene
5 Kukangaki sinenyanga eluhlaza okwesibhakabhaka?
Yini inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka
Inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka noma inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka esiNgisini, kungumcimbi owenzeka eminyakeni ethile ku labo abanezinyanga ezingaphezu kwesisodwa ezigcwele ngenyanga. Yize ibizwa ngokuthi luhlaza okwesibhakabhaka, akusho ukuthi le nyanga yesibili egcwele esiyibukayo iluhlaza okwesibhakabhaka ngokufanele. Akuhlangene ngalutho nakho. Yigama elibizwa enyangeni egcwele yesibili yenyanga futhi elenzeka njalo kaningi.
Ngalo nyaka we-2018 sibe nezinyanga ezimbili eziluhlaza okwesibhakabhaka. Kungumcimbi ongavamile ukwenzeka. Ngenyanga kaJanuwari besinezinyanga ezimbili ezigcwele kuyo yonke inyanga efanayo nangoMashi. Inyanga yesibili yale nyanga yiyo ethathwa njengenyanga eluhlaza okwesibhakabhaka.
Leli qiniso lingenxa yokuthi inyanga egcwele yenzeka cishe njalo ezinsukwini ezingama-29,5. Lokhu yilokho okubhekwa njengenyanga yenyanga noma umjikelezo wenyanga, lapho zonke izingxenye zakho ze- isigaba. Uma inyanga egcwele ivela ekuqaleni kwenyanga, ingaba yinde ngokwanele ukuthi kube khona umzuzwana ekugcineni. Ukuze lokhu kwenzeke kumele siqhubeke nokutadisha amaphethini we-biodynamic wezigaba nomjikelezo wesathelayithi yethu.
Izinyanga ngoMashi 2018
Sizohlaziya ukuthi kungani inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka yenzeka ngenyanga kaMashi 2018. Njengoba uFebhuwari enezinsuku ezingama-28 kuphela, imfushane impela nezinye izinyanga. Ngakho-ke, uma inyanga egcwele ivela ekuqaleni kwenyanga, inika isikhathi esanele ukuze kuthi ekugcineni kuphela ubone enye. Inyanga yokuqala ephelele yaba ngoMashi 2 kwathi eyesibili yaba ngoMashi 31, usuku lokugcina kuphela lwenyanga. Le nyanga yesibili yilokho esikubiza ngokuthi inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka.
Hhayi ngenxa yalesi sizathu, inombala oluhlaza okwesibhakabhaka noma yini efana naleyo. Uma lo mcimbi wenzeka, onyakeni wonke izinyanga eziyi-13 ezigcwele ziyabhaliswa esikhundleni sika-12. Kwenzeka okufanayo nangezikhathi zonyaka, lapho ezinye zazo zingaba nezingu-4 esikhundleni se-3.
Le nyanga yonyaka eluhlaza okwesibhakabhaka ibizwa ngokuthi inyanga yenyanga eluhlaza okwesibhakabhaka. Kubalimi, ukuba khona kwalesi simo kubaluleke kakhulu kangangokuba bakubeke emakhalendeni abo. Kulabo abafuna ukwazi ukuthi sizoyibona nini enye inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka yonyaka, kuzoba ngoMeyi 18, 2019.
Ngubani igama layo uma kungenasibhakabhaka
Igama elikhombisa umbala isathelayithi elingenawo, lingaholela ekukhohlisweni noma iphutha. Kucatshangwe ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kungani leli gama lifanelekile uma lingenawo umbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Umbono osabalele kakhulu ongachaza ubukhona baleli gama uthi lowo othi uvela esiNgisini sasendulo. Kusemuva lapho lalibizwa khona i-belewe, okusho ukuthi "ukukhaphela." Kamuva wabizwa blue, okusho okuluhlaza okwesibhakabhaka. Kungenzeka ukuthi leli gama livela enyangeni ekhohlisayo enqume ukuvela phakathi nenyanga ebingahambisani nayo iqhubeke phambili.
Yize kuyinkolelo-mbono evelele kunayo yonke, kukhona eminye ekhomba umehluko othile. Futhi ngukuthi ucabanga ukuthi ngaphambi kokuba kube nomqondo wokuthi leyo nyanga yesibili yayinenhlanhla futhi, ngakho-ke, Kwakuhlotshaniswa nombala oluhlaza okwesibhakabhaka omele ukudabuka.
Noma ngabe ivelaphi, okufanele ukwazi ukuthi, empeleni, inyanga egcwele yesibili onayo ngaphakathi kwenyanga efanayo ayinayo umbala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Izigaba zenyanga kuma-hemispheres ahlukahlukene
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi sithole inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka, kepha akubhekiseli kumcimbi esiwubonile. Kwezinye izimo singabona inyanga ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka futhi kuyinto engavamile kakhulu.
Okwenza ubukeke lo mbala ubukhona bothuli noma intuthu yomlotha ezingxenyeni ezingenhla zomkhathi. Lezi zinhlayiya zenza ukuthi ilambu elibomvu lisakaze kancane bese kuthi ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kugqame. Noma kunjalo, inyanga akudingeki igcwale ukuze ibe yilowo mbala. Lesi simo asihlangene nakancane nokuthi kunezinyanga ezimbili ezigcwele ngenyanga efanayo.
Lesi simo senzeke ngenxa yokuqhuma okuthile kwentaba-mlilo lapho inani elikhulu lomlotha wentaba-mlilo lalinomthwalo wokusabalalisa ukukhanya okubomvu okuvela emkhathini ukuze kubukeke kuluhlaza okwesibhakabhaka. Ngalo nyaka, ngaphandle kokuthi kuqhume intaba-mlilo enkulu, ngeke siyibone inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka. Umlilo omkhulu wehlathi ungasivumela futhi ukuba sikwazi ukubona lo mbala omuhle kusathelayithi yethu, unikezwe intuthu enkulu nomlotha.
Kukangaki sinenyanga eluhlaza okwesibhakabhaka?
Yinto abaningi abafuna ukuyazi. Cishe njalo eminyakeni emithathu ungabona izinyanga ezimbili ezigcwele ngenyanga efanayo. Lokhu kulula ukukusho ngokubala njengokujikeleza kwenyanga kwezinsuku ezingama-29,5. Uma ubala inyanga nenyanga, uzothola leyo nyanga engabamba izinyanga ezimbili ezigcwele. Kuyaqabukela ukuthi ngonyaka ofanayo kube nezinyanga ezimbili eziluhlaza zilandelana njengoba kube nalo nyaka.
Ukuze wazi kangcono ukuthi lesi simo senzeka kanjani, kulula ukwazi ukuthi ifayela le- ikhalenda yenyanga maqondana nesayithi. Njengoba sazi, ikhalenda elanga yilona elisebenza ngokususelwa esikhathini esithatha umhlaba wethu ukuzungeza iLanga. Okungukuthi, unyaka ohlukaniswe waba yizinyanga eziyi-12 nezinsuku ezingama-365 cishe. Kodwa-ke, imijikelezo yenyanga ihlala izinsuku ezingama-29,5.
Ngakho-ke, umjikelezo we-metonic yiwona ohambelana ngenkathi kuthatha ikhalenda yenyanga ukuvumelanisa ngokugcwele nomjikelezo welanga. Le yindlela ephindaphindwa ngayo futhi nokuziphatha kuhambelana ngokuphelele.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi wazi okuningi ngenyanga eluhlaza okwesibhakabhaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka
Uyini ububanzi bomhlaba?